Harena an-kibon’ny tany: « Guichet unique » ao amin’ny MBC Ivato | NewsMada
Harena an-kibon’ny tany: « Guichet unique » ao amin’ny MBC Ivato
Nanomboka omaly ary hitohy hatramin’ny asabotsy izao ny “Foaran’ny vatosoa sarobidy sy ny firavaka” etsy amin’ny Mining Business Center Ivato (MBC). Notokanana tamin’izany koa ny “guichet unique”, toerana ahafahana manara-maso akaiky ny fivoahan’ny vato sy ny fandoavam-bola rehefa hividy izany vatosoa izany.
Hita ao an-toerana avokoa ireo rehetra tokony hatao amin’ny karazan-taratasy hampanarahan-dalàna ny fivezivezen’ny vato. Hatramin’ny fanondranana amin’ny fomba ara-dalàna ny vatosoa, hatao ao amin’io toerana ity avokoa.
Fotoana hampahafantarana ny tontolon’ny harena an-kibon’ny tany, indrindra ny karazana vato sarobidy eto amintsika, izao dimy andro izao, raha ny fanazavana. Misokatra ho an’ny rehetra ary maimaimpoana izany.
Tafakatra 1 tapitrisa ny mikirakira vatosoa
Miainga hatrany amin’ny fitrandrahana madinika, hatrany amin’ny fandidiana vato sy ny fitiliana vato ary tonga hatramin’ny fanondranana ny zavatra ho hita mandritra ny fampirantiana. Eto Madagasikara, mahatratra 500 000 ireo mpitrandraka vato sy ireo mivelona amin’izany. Tafakatra 1 000 000 anefa izany rehefa fotoana itsaharan’ny asan’ny tantsaka ka mamonjy ireo kariera ireny izy ireo.
Midadasika ny fitrandrahana amin’ny toerana maro eto Madagasikara. Tsy mbola tena voafehy tanteraka izany ary kely ny vola miditra amin’ny kitapom-bolam-panjakana, raha resahina ny tontolon’ny vato sarobidy. Mitohy anefa ny ezaka ataon’ny Institut de gemmologie de Madagascar (IGM) sy ny Bureau du cadastre minier de Madagascar (BCMM) amin’ny fampanarahan-dalàna ny sehatra fitrandrahana sy fanondranana vato.